Bulshada CRM: Warbaahinta Bulshada iyo Maareynta Xiriirka Macaamiisha
EBook bilaash ah: U guurista Bulshada CRM
Tuesday, May 31, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maareynta Xiriirka Macaamiilku wuxuu fure u yahay ururada badankood, iyaga oo siiya sirdoonka iyo xogta ay u baahan yihiin si ay xiriir wanaagsan ula yeeshaan macaamiishooda. Dhigista warbaahinta bulshada dusha sare ee nashaadaadkaaga xiriirka macaamiisha waxay dardar gelin kartaa waxqabadka shirkaddaada waxayna dhiseysaa xiriir aad u adag - taas oo keeneysa fursado badan oo lagula xiriiro macaamiisha ka baxsan howlaha rasmiga ah iyo dhisidda bulshada.
Emailvision ayaa hadda soo saaray Social CRM for Dummies, ebook bilaash ah oo ka caawin doonta shirkadaha inay fahmaan farqiga u dhexeeya Bulshada CRM iyo CRM iyo sidoo kale sida looga faa'iideysto bulshada dadaalkooda CRM.
Buugga: Warbaahinta bulshada iyo isku xirnaanta waxay u beddeleen dhaqaalaha adduunka wax u eg sidii suuq yar oo magaalo ku yaal, halkaasoo buuqa bulshada, ee aan ahayn suuq-geynta suuqgeynta, ay go'aamiso in ganacsiyada ay kobcayaan iyo inay fashilinayaan. Bulshada CRM waa jawaab istiraatiiji ah jawigan ganacsi ee cusub. Iyada oo CRM Bulshada:
Diiradu waxay saaran tahay bulshada iyo dhisida xiriirka.
Via goobaha bulshada, oo ay ku jiraan Facebook iyo Twitter, macaamiisha ayaa iska leh oo xukuma wada hadalka.
Isgaarsiintu waa ganacsi-u-macaamil laakiin sidoo kale macaamiil-iyo-macaamil iyo macaamil-u-rajo.
Macaamiilku wuxuu si toos ah ama si aan toos ahayn ula shaqeeyaa ganacsiyada si loo hagaajiyo wax soo saarka, adeegyada, iyo waayo-aragnimada macaamiisha.
Wadahadalku waa mid aan rasmi ahayn oo "dhab ah", ka guurista magaca ku hadalka bulshada.
EBook wuxuu bixiyaa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah - laga bilaabo dhisidda istiraatiijiyad, xulashada tiknoolajiyada saxda ah, sida looga faa'iideysto tiknoolajiyadda, tababaridda shaqaalahaaga, cabbiraadda natiijooyinka - dhammaan habka looga fogaado dhibaatooyinka guud.
Siidayn buuxda: Waxaan helay nooc sii-deynta eBook-ka ah waxaanan u qoray talobixin. Muuqaalka iimaylka ayaa sidoo kale macmiil u ahaa DK New Media .
SmartDocs: Maamul Keydinta Erayga Microsoft
Mashruuca Domino: Ku Kalsoonow Caqabada Qoraalkaaga
Agoosto 10, 2011 saacaddu markay ahayd 7:58 PM
maqaal weyn! bulshada CRM hubaal waa kor iyo kor. Ma maqashay GreenRope? Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku maamusho CRM-gaaga iyo wax kasta oo kale hal dashboard.